Juventus oo hogaanka Serie A dheeraysatey & wararka kulamadii dhacay todobaadkan – SBC
Juventus oo hogaanka Serie A dheeraysatey & wararka kulamadii dhacay todobaadkan
Posted by editor on October 31, 2011 Comments
Weeraryahanka reer Sweden & kooxda AC Milan Zlatan Ibrahimovic ayaa laba gool oo uu u dhaliyey kooxdiisa ayaa saamaxay inay AC Milan guul caaqibo leh ka gaarto kulan adag oo ay la yeelatey kooxda Roma kaasi oo ku soo idlaadey 3-2.
Kulankan oo ka dhacay guriga Roma ee Stadio Olimpico wuxuu ahaa kii afaraad oo xiriir ah oo ay AC Milan ku talaabsato tan iyo bilowgii xili ciyaareedkan oo ay kooxdu ku bilowdey jawi cariiri ah oo aad u hooseeya.
Goolasha Zlatan Ibrahimovic uu dhaliyey daqiiqadihii 17, 78 ayaa waxaa sadexeeyey gool daqiiqadii 30-aad uu dhaliyey xidiga da’ada ah Alesssandro Nesta oo madaxa la helay kubad koorno aheyd.
Guushan waxay AC Milan u riixdey kaalinta afaraad waxaana ay quudareynaysaa inay difaacato koobka Serie A ee ay haysato sanadkan.
Labada gool ee ay la timid kooxda martida loo ahaa ee Roma waxaa u kala dhaliyey Burdjsso daqiiqadii 28-aad & Bojan daqiqiadii 87-aad.
Juventus oo quusisay Inter hogaankana sii dheeraysatey
Kooxda Juventus ee sanadkan xawaaraha sare ku socota ayaa dhulka ku jiiday quus ku ridey kooxda Internazionale ka dib markii ay ku garaacdey 2-1 ciyaar adag oo ka dhacdey garoonka Inter ee Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), iyadoo guushaasi Juva ku riixdey in muran la’aan ay ku qabsato hogaanka horyaalka, halka Inter ayt ku dhacdey kaalinta 17-aad.
Gool furitaan ah oo daqiiqadii 12-aad uu ka xareeyey Inter ciyaaryahanka reer Montenegro Mirco Vucinic oo bilowgii bishan October 28 sano jir noqdey ayaa waxaa daqiiqadii 28-aad soo bareejeeyey daafaca Inter ee reer Brazil Maicon oo ka dhigay ciyaarta 1-1.
Goolkaasi barbardhaca ah wuxuu rajo soo galiyey kooxdii martida loo ahaa balse shan daqiiqo ka dib waa 33-aad waxaa shabaqa Inter kubad laad ah oo uu la dhexmarey daafaca ku hubsadey ciyaaryahan Claudio Marchisio oo goolkaasi uu dhaliyey guusha u horseeday kooxda martida aheyd ee Juva.
Guuladarada Inter ee kulankan waxay ka dhigan tahay tii shanaad 9-kii kulan ee ay safatey horyaalka, waxaana wali kala cadeyn mustaqbalka kooxda si ay ku soo gaari karto maqaamkii ay joogtey, inkastoo tababare cusub la keenay hadana xaajada Inter waa faanoole fari kama qodna.
Udinese oo guuldaradii todobaadkii hore ka soo waaqsatey Palermo oo ay ku garaacdey 1-0
Hal oo madi ah oo uu weeraryahanka Udinese ay ku dhaarato ee Antonio Di Natale uu u saxiixay qaybtii koowad ee ciyaarta gaar ahaan daqiiqadii 38-aad ayaa meesha ka saarey niyad jabkii Udinese ka soo gaaray guuldaradii todobaadkii hore ka soo qabsatey Stadio San Paolo ee kooxda Napoli oo 2-0 loogu soo sagootiyey.
Udinese oo ku martiogalisey gurigeeda Stadio Friulli kooxda Palermo ayaa guushaasi waxay u xaqiijisay inay cariirsato kaalinta labaad oo todobaadkii hore laga tuuray.
Lazaio oo guul ay ka gaartey kooxda Cagliari ku riixdey kaalinta sadexaad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga
Kooxda Lazio ayaa u booday kaalinta sadexaad ee horyaalka Talyaaniga ka dib markii ay ku garaacdey 3-0 kooxda Cagliari oo ay ugu tagtey gurigeeda Stadio Sant’Elia
Goolasha sadexda ah ee kooxda martida ah ku badisay waxaa u kala dhaliyey weeraryahanka reer Bosnia Senad Lulic, oo daqiiqii 39-aad dhaliyey, Miroslav Klose daqiiqadii 44-aad & Tommaso Rochhi.
Guushan oo aheyd tii shanaad ee Kooxda Lazio ay hanato waxay niyad weyn siinaysaa kooxdan oo todobaadka soo socda gurigeeda Stadio Olimpico, ee ay la wadaago kooxda Romekula ciyaari doonto kooxda Parma
Catania 2-1 Napoli oo isku fara saaray garoonka Catania ee Stadio Angelo Massimino, Catania
Seina 4-1 Chievo oo isku arkay Stadio Artemio Franchi-Montepaschi Arena, Siena
Bologna 3-1 Atalanta oo isku hirdiyey Stadio Dall’Ara, Bologna
Lecce 1-1Novara oo isku gacan qaaday Stadio Via del mare, Lecce
Parma 2-0 Cesena oo ku hardamay Stadio Ennio Tardini, Parma
Fiorentina 3-1 Genoa Stadio Artemio Franchi, Florence
Gooldhalinta horyaalka Talyaaniga
1: Antonio Di Natale==========7 gool kooxda Udinese
2:Miroslav Klose ============ 6 gool kooxda Lazio
3:Sebastian Giovinco =========6 gool kooxda Parma
4:German Denis =============6 gool kooxda Atalanta